Fandraisana fitadiavana | Fifamoivoizana hiara-miasa
Ity manaraka ity dia manoritsoritra ny Disclaimer amin'ny karama ho an'ny My Traffic Blog tranonkala.
09/24/2021 05:50 hariva GMT
Miezaka mafy izahay mba hahazoana antoka fa misolo tena an'ireo vokatra ireo sy tolotra ary ny mety ho fidiram-bolan'izy ireo. Fanambarana fidiram-bola sy fidiram-bola nataon'i My Traffic Blog ary ny mpanjifany dia tombatombana amin'izay heverinay fa mety hahazoanao. Tsy misy antoka azo antoka fa hanao ireo ambaratongam-bola ireo ianao ary hanaiky ny loza mety tsy hitovizan'ny isam-batan'olona.
Toy ny raharaham-barotra rehetra, ny valiny dia mety miovaova, ary hiankina amin'ny fahaizanao manokana, traikefa amin'ny fandraharahana, ny fahaizanao ary ny haavon'ny fanirianao. Tsy misy antoka momba ny haavon'ny fahombiazana mety ho azonao. Ny fijoroana vavolombelona sy ohatra ampiasaina dia valiny miavaka, izay tsy mihatra amin'ny mpividy antonony, ary tsy natao hanehoana na hiantohana fa hahatratra ny vokatra mitovy na mitovy amin'izany ny tsirairay.
Ny fahombiazan'ny tsirairay dia miankina amin'ny fiainany, ny fanolorantenany, ny faniriany ary ny antony manosika azy. Tsy misy antoka fa ny ohatra amin'ny karama taloha dia azo averina amin'ny ho avy. Izahay dia tsy afaka miantoka ny valinao amin'ny ho avy sy / na ny fahombiazanao. Misy loza mety hitranga tsy fantatra amin'ny raharaham-barotra sy amin'ny Internet izay tsy hitantsika mialoha izay afaka mampihena ny vokatra.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny hetsika nataonao izahay. Ny fampiasana ny mombamomba anay, ny vokatra ary tolotra dia tokony hiorina amin'ny fahazotoanao manokana ary manaiky ianao fa ny My Traffic Blog Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny orinasanao izay misy ifandraisany mivantana na ankolaka amin'ny fividianana sy ny fampiasana ny mombamomba anay, ny vokatra ary tolotra.
izany tranonkala dia misy na mety misy "fanambarana mitodika any aoriana" ao amin'ny hevitry ny Fizarana 27A an'ny Securities Act of1933 sy ny Fizarana 21B an'ny Securities Exchange Act of1934. Ny fanambarana rehetra izay maneho na misy resaka momba ny vinavina, ny fanantenana, ny finoana, ny drafitra, ny vinavina, ny tanjona, ny tanjona, ny fiheverana na ny ho avy na ny zava-bita amin'ny ho avy dia tsy fanambaràn'ny zava-misy ara-tantara ary mety ho "fanambarana jerena mialoha."
Ny fanambarana mialoha dia mifototra amin'ny andrasana, vinavina ary vinavina amin'ny fotoana namoahana ireo fanambarana izay misy risika sy fisalasalana maromaro izay mety hiteraka tsy fitoviana ara-materialy amin'ireo valiny na zava-mitranga marina amin'ireo izay andrasana ankehitriny. Ny fanambarana mandroso amin'ity hetsika ity dia mety ho fantatra amin'ny alàlan'ny fampiasana teny toa ny "manantena", "will", "antenaina," "tombana," "mino," na fanambarana milaza fihetsika sasany "mety," "mety", na "Mety" hitranga.
FANAMARIHANA FANOVANA: Toy ny pejy fampandrenesana ara-pitantanana sy ara-dalàna anay rehetra, ny atin'ny ity pejy ity dia afaka miova rehefa mandeha ny fotoana. Araka izany, ity pejy ity dia afaka mamaky hafa amin'ny fitsidihanao manaraka. Ireto fanovana ireto dia ilaina ary tanterahin'i My Traffic Blog, mba hiarovana anao sy ny bilaogiko My Traffic tranonkala. Raha zava-dehibe aminao ity pejy ity dia tokony hijerena matetika ianao satria tsy misy fampandrenesana hafa momba ny atiny voaova omena na alohan'ny na aorian'ny fampiharana ny fiovana.
FAMPITANDREMANA COPYRIGHT: Ireo fanamarihana ara-dalàna sy pejy fitantanan-draharaha momba an'io tranonkala, anisan'izany ity iray ity, dia navoakan'ny mpisolovava iray tamim-pahazotoana. Izahay ao amin'ny My Traffic Blog dia nandoa vola mba hanomezana alalana ny fampiasana ireo fampandrenesana ara-dalàna sy pejy fitantananana ao amin'ny My Traffic Blog ho fiarovana anao sy anay. Ity fitaovana ity dia mety tsy hampiasaina amin'ny antony na inona antony ary ny fampiasana tsy nahazoana alàlana dia nopetahana tamin'ny alàlan'ny Copyscape mba hahitana ireo mpandika lalàna.